Posted on November 4, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 415 Views
Share66TweetGoogle+Pin066sharesहामीकहाँ मृगौलाको पत्थरीका विरामीकाे कमी छैन्, झन झन बढ्दै गएका छन् । पत्थरीको आकार केही साना हुन्छन् भने केही ठूला । सानो खालको पत्थरीलाई प्राकृतिक उपायमार्फत पिसाबबाट पनि निकाल्न सकिन्छ । हामी यस्ता खानेकुराकाेबारे वर्णन गर्दैछाैँ जसले पत्थरीबाट बचाउँछ । १. बेथेको साग मिर्गौलाको पत्थरी निकाल्नका लागि बेथेको साग उपयोगी मानिन्छ । यसका लागि आधा विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Share9TweetGoogle+Pin09sharesउखुमा प्रशस्त मात्रामा पानीको मात्रा हुने भएकाले पिसाव सम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति मिल्छ । यसको सेवनले कलेजोलाई मजबुत बनाइराख्न मद्दत गर्नुका साथै कलेजो सम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति मिल्छ । उखुको रस सेवन गर्नाले शरीरमा पानीको मात्रालाई सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्छ । उखुको जुसका यस्ता फाइदाः १. पाचन प्रणालीमा सुधारः उखुको रसमा हुने पोटासियमले पाँचन प्रणाली पनि राम्रो विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Share22TweetGoogle+Pin022sharesतपाईँ नयाँ वर्षमा स्वास्थ्यबारे सोचिरहनुभएको छ भने, धेरै चिन्ता नलिनस्। दैनिक जीवनका आफ्ना गतिविधिमा ख्याल गर्नुस् त्यसले स्वास्थ्य सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। योग गर्नुस्, दौडनुस्, कार्बोहाइड्रेट अथवा चिल्लो कम गर्नुस्, अत्यधिक मदिरा सेवन छोड्नुस् र तनाव कम लिनुस्। तर तपाईँले एउटा मात्रै परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भने? हामीले यसबारे विज्ञलाई सोधेका छौं- यो सोचेर की यदि विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…